‘बेस्ट प्लेयर ईन युरोप’ उपाधि घोषणा आज , को हुन् प्रमुख दाबेदार ?
‘बेस्ट प्लेयर ईन युरोप’ उपाधि घोषणा आज , को हुन् प्रमुख दाबेदार ?	By नवीन सन्देश on	९ भाद्र २०७३, बिहीबार १४:४७
काठमाडौँ । यूएफाले ‘बेस्ट प्लेयर ईन युरोप’ उपाधिको घोषणा आज गर्दै छ । च्यामिपयन्स लिगमा छनोट भएका ३२ क्लबको ग्रुप स्टेज ड्र को लागि हुने बिशेष कार्यक्रममा युरोपको उत्कृष्ट खेलाडीको समेत घोषणा हुन लागेको हो ।
उपाधिका लागि पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेल्सका गारेथ बेल र फ्रान्सका करिम एन्टोनी ग्रिजमन प्रतिस्पर्धामा छन्। फ्रान्सको मोनाकोमा बेलुका ६ बजे हुने उक्त कार्यक्रम नेपाली समयअनुसार राति १० बजे सुरु हुनेछ। कसले जित्ला उपाधि ? सन् २०१४/१५ को उपाधि अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीले जितेका थिए तर यस पटक भने उनी अन्तिम ३ मा पर्न सकेनन ।
अन्तिम ३ मा परेका खेलाडी मध्ये कसको प्रदर्शन कस्तो ? ग्यारेथ बेल रियल म्याड्रिडका फरवार्ड बेलले ला लिगामा गत सिजन १९ गोल तथा १० असिस्ट गरेका छन् भने च्याम्पियन्स लिगमा उनले ७ गोल तथा ३ असिस्ट गर्दै रियल म्याड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
युरो कपमा उनले ६ खेलमा ३ गोल तथा ए असिस्ट गर्दै वेल्सलाई सेमिफाइनलसम्म पुर्याउन महत्वपुर्ण भूमिका खेले । पहिलो पटक डेब्यु गरेको वेल्स सेमीफाइनलसम्म पुग्न सफल भएको थियो । चोटका कारण उनले ला लिगाको धेरै खेलहरु खेल पाएनन् । यसै कारण रोनाल्डो भन्दा उनको गोल केहि कम छ ।
एन्टोनी ग्रिजमन एटलेटिकोका स्टार खेलाडी ग्रिजमनको ला लिगामा गत सिजन २२ गोल तथा ३ एसिस्ट छ । च्याम्पियन्स लिगमा उनले ७ गोल गर्दै टोलीलाई फाइनलसम्म पुर्यांउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । फाइनलमा एटलेटिको रियल म्याड्रिडसंग पराजित भएको थियो। युरो कपमा ग्रिजमनको प्रदर्शन झन् राम्रो थियो । उनले ६ गोल गर्दै उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समेत पाए । तर उनको टोली फ्रान्स फाइनलमा पोर्चुगलसंग पराजित हुदै उप बिजेता मै सिमित भएको थियो ।
रोनाल्डो रोनाल्डोले ला लिगामा रियल म्याड्रिडका लागि ३५ गोल तथा ११ एसिस्ट गरे । च्याम्पियन्स लिगमा उनले सर्बाधिक १६ गोल गर्दै टोलीलाई उपाधि समेत दिलाए । युरो कपमा उनले ३ गोल गर्दै टोलीलाई उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
रोनाल्डोले यस सिजनमा पोर्चुगललाई युरोकपको उपाधि, रियल म्याड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलकाले रोनाल्डो ‘बेस्ट प्लेयर ईन युरोप’ का प्रबल दाबेदार हुन् । ला लिगामा उनको टोली बार्सिलोना भन्दा केवल १ अंक पछि पदी दोस्रो भएको थियो ।
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts १९ मंसिर २०७३, आईतवार १३:४८ 0	सुज़ुकी एसिया च्यालेन्ज ड्रिमकप खेलको लागि नेपाली अन्तराष्ट्रिय खेलाडी बिक्रम थापा
११ मंसिर २०७३, शनिबार १७:५३ 0	महिला एसिया कप: पाकिस्तानसँग ९ विकेटले पराजित
१० मंसिर २०७३, शुक्रबार १५:३१ 0	चौथो महिला साफ च्याम्पियनसिपका खेलाडी छनौट